Norwegian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Loading ...Kubhejera hakuwanzo kufarirwa nevanhu vakawanda muNorway. Muma40s nema50s, kunyangwe iri nyore kadhi mitambo haina kubvumidzwa nevanhu. Iye zvino Norway ine makambani maviri ehurumende, ane kodzero yekupa kubhejera vaNorway. Norsk Kubvarura inogadzirisa marotari, kubheja zvemitambo uye mitambo yepakarepo, uye Norsk Rikstoto inodzora kubheja pamijaho yemabhiza. Nzvimbo dzemitambo dzakakurumbira kwazvo munyika, asi dzakarambidzwa muna 2007, uye ndokuzoratidzwa zvakare muchimiro chema intervideo terminals anoda makadhi akasarudzika. Aya makadhi akasunganidzwa kumaakaundi ebhengi evatambi uye ari pasi peganhuriro dzakasimba.
Pamberi Yokubhejera muNorway
Kubhejera pamhepo zviri pamutemo muNorway, asi mamiriro ezvinhu pano akaomarara. Norsk Tipping, kambani yenyika inodzora rotari nemitambo kubheja muNorway, yakaenda online mu2002. Parizvino iyi ndiyo yega webhusaiti iyo vatambi veNorway vanogona kuisa zviri pamutemo kubhejera, kubva munaZvita 2008 kushandisa masevhisi enzvimbo dzekunze kubhejera. muNorway hazvisi pamutemo.
Kurambidzwa kunosanganisira kutenderera kwakafanana nemitemo yekubhejera muUnited States - Norges Bank haitenderwe kuendesa mari kubva kumaakaundi eNorway kuenda kumaakaundi evamwe vanobheja. Nekudaro, hurumende inoronga kupedzisa kuvharira vanopa kunze havasati vaitwa, uye vashandisi vekunze vanowanikwa kune vatambi vemuno.
Rwendo rweHotel 10 yeNorwegian Online Casino Sites
Sites online casinos anobvuma vatambi vanobva kuNorway
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuNorway, uye inopa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongorora kwedu kwepaInternet sites, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye zvingororo zvekubhadhara zvinowanikwa kune vatambi vanobva kuNorway.
Nhasi tinoenderera mberi nerwendo rwedu kuburikidza nenyika dzeScandinavia uye nzira yedu iri munyika yakanaka yefjords, mapopoma akanaka, chando uye polar auroras - muNorway. Iyi nyika inoshamisa ine mamiriro ekunze akashata haakusiye usina hanya. Tinofamba mumigwagwa yeOslo, pamwe nekutsvaga kuti zvinhu zviri kufamba sei nekubhejera. Ndezvipi zvakavanzika uye zvakasarudzika zvinochengetedza nyika ino?
Norway - zvishoma nezvenyika uye nhoroondo yayo;
Kasinos-based-based inyika haisi ikozvino kuwanikwa uye haisi pamutemo;
Iwo makambani maviri «Norsk Kubvarura» uye «Norsk Rikstoto» - anotenderwa kuitisa kubhejera;
Yakabvumidzwa lottery, kubheja pane zviitiko zvemitambo, makadhi ekutanga, keno, poker kubvira 2015.
Kasinasi dziri paIndaneti munyika:
dzose makasitorendi emamwe marudzi akadziviswa kubva ku2010, vazhinji vanoenderera mberi kutamba zvisina kutenderwa, sezvo kwete nzvimbo dzose dzepasi pose dzakadziviswa;
norsk-tipping.no/kongkasino - ndiyo chete nzvimbo yakatenderwa.
Zvinhu zvishanu zvinoona Norwegian capital Oslo nekero;
Chokwadi chinofadza pamusoro peNorway uye vagari varo.
Nhoroondo pfupi yeNorway
Norway ndiyo humambo hwekuchamhembe kweEurope, iri munzvimbo yekumadokero kweScandinavia Peninsula. Nyika inosanganisirawo kupararira kwese kwezvitsuwa zvidiki.
Sezvingabvira, zita renyika rakabva mushoko rekare reNorse ” Norðrvegr ", Zvinoreva" nzira yekuchamhembe. " Uye inofanira kucherechedzwa, yakaoma mamiriro ekunze enyika akasiya chiratidzo munhoroondo yayo. Mushure menguva yechando mune izvo zvava kunzi Norway yave mamiriro ekunze akanaka, saka yaive nevanhu vazhinji.
Asi nekuwedzera kwehuwandu hwevhu hwehuwandu hwevanhu hwakadzikira, uye hafu yechirume yevagari yaishuvira mukurumbira neupfumi. Naizvozvo, munguva pfupi iri kutevera nguva yekukunda kweViking, iyo ndima yemari iri kuTurkey pachayo.
Mune 18-19 century Norway inouya pasi pesimba reDenmark neSweden yakavakidzana uye inoda kurasikirwa nemamiriro ehurumende yakazvimirira. Asi muna 1905 mhedzisiro yevhoti yakakurumbira mubatanidzwa neSweden wakabviswa uye nyika yakawana kuzvitonga. Zvino hutongi hweNorway hwebumbiro remitemo, zita ramambo ndiHarold V.
Ngatitii panguva imwe chete, kubhejera munyika ino kuri strogo.Po ichienzaniswa nenyika dzakavakidzana Swedenand Finland ndiyo mitemo yakanyanya kuomarara maererano nekubhejera. Munyika mune makambani maviri chete («Norsk Tipping» uye «Norsk Rikstoto»), avo vanobvumidzwa kuitisa kubhejera. Chaizvoizvo irotari, kubheja pazviitiko zvemitambo uye keno. Ivo vanozviisa pasi pe Ministry of Culture, inoisawo mitemo yayo. Izvi zvinosanganisira muganho wezera kusvika pamakore gumi nemasere.
Slot michina muNorway yakakurumidza kutumbuka muna 2001-2004, asi muna 2007 hurumende yakaunza kudzora kwakasimba kwehukuru hwavo uye zvakanyanya kudzikisa huwandu hwayo. Zvekubhejera pamhepo munyika zvakange zvisina rombo rakanaka: kubva munaJune 2010, ese makuru nzvimbo dzekunze dzakarambidzwa muNorway, uye mabhanga ari kuvharira madhibhiti nemakadhi echikwereti mumakasinasi eNorway epasirese kutenderera pasirese.
Ehezve, kana iwe uchida kuronga imwe partiy- poker pamba, saka iwe pazvayo hazvizove chinhu. Asi kana zvikave zvakarongeka uye vamiriri vemitemo vanopihwa kune rako rakabatikana bhizinesi chinzvimbo - mhosva yematsotsi kwauri haizopukunyuke. Nekuda kwechimiro chakasimba kudaro kubhejera munhau kazhinji kupenya mishumo yekupaza mumakasino asiri pamutemo uye makirabhu epoker, uye vateveri vanofarira vanofanira kutamba kuti vafare kunze kwenyika.
Viking Ship Museum. Kero: Huk Aveny 35. Kubvira ku1931, izvi zvitsva zvezvikepe zvinofadza maziso nemafungiro ekufungidzira turistov .Ekspozitsiya iyicraftcraft ye 3, yakavakwa muzana remakore re 9, uye inosvika mugungwa kune makore anopfuura 1,000.
Munch Museum. Kero: Toyengata, 53. Iyi miziyamu yakaunganidza nezve 28,000 pendi, maposta, mifananidzo uye zvigadzirwa zvakafambidzana nehupenyu hwenyanzvi huru. Vashanyi vari pasi pe18 yemahara yekupinda mumuseum. Pano ratidza mafirimu nezve muimbi uye anoita makonzati uye zvesimba.
Paki Yekuzvivaraidza "Tusenfrid". Kero: Hoyungsletta, 1407 Sezvo (ingangoita makiromita makumi maviri kubva kuOslo). Munguva iyi paki yakawana mukurumbira wepaki yekuvaraidza yakanyanyisa muScandinavia. Kana uine tsinga dzesimbi, tinokurudzira kuti uedze iyo «Speed ​​Monster»: mujaho mota inokwana zviuru zvitanhatu zvemabhiza inokudziridza kumhanya kwe6,000 km / h mumasekondi maviri chete uye rally kanomwe iwe uchazviwana uri mudunhu zvekurema. Kune zvakare paki yemvura, zvinokwezva zvevana uye maresitorendi mazhinji.
Paki "Gustav Vigeland." Kero: Nobels gedhi 32. Unosarudza here kufunga chivezwa chiri panze? Ipapo iyi sarudzo iwe yakakwana. Pano, pakati pemiti yakashongedzwa uye nharaunda dzakanaka iwe unowana 212 zvivezwa zvakagadzirwa negranite uye bronze.
Guta reDzimba Horo. Kero: Fridtjof Nansens plass. Chivako chinonakidza chechivakwa kubva kunze nekumukati chinonakidza kwazvo. Kubva 1990 yakaitirwa pano mubairo weNobel. Mukati mechivakwa iwe unowana chinoshamisira kushongedzwa kwemakamuri, kupenda kwakajeka uye mafrescoes akapfava.
Chokwadi chinofadza pamusoro peNorway neNorway
Norway inyika diki - ingangoita mamirioni mashanu vagari. Pfuma huru yechisikigo yeNorway - oiri. Yakawanikwa muna 5 uye yakatumira kuEurope;
Paperclip yakagadzirwa uye yakagadziriswa muNorway Johan Valer;
Mamiriro ekunze muNorway ari kuchinja nekumhanya kwemheni. Kune kunyange chirevo chakakodzera: "Ini handifarire mamiriro edu ekunze? Kwete dambudziko, mirira maminetsi gumi nemashanu “;
«Brunost» - shava yembudzi chizi, chimwe chezvinhu zvinonaka kwazvo munyika ino;
Kuwanda kwevana mumhuri pano chiratidzo chinonyatsojeka chehupenyu. Avhareji nhamba yevana mumhuri - vatatu;
Jasi ramambo rinogona kuverengwa chirevo "Zvese kuNorway";
Misha yemunharaunda 5 kusvika ku 7 zviuru zve euro, asi mitero iri munyika ino yakakwirira, uye mishonga yacho inodhura, uye inodhura mabasa (tekisi, kugadzirisa, nezvimwe);
"Aquavit" (chiLatin che "Mvura Mhenyu") - chinwiwa chinwiwa chenyika mu 35 - 50% chinogadzirwa mbatatisi doro, chakasimwa kwemakore akati wandei pazvinonhuwira (kumini, coriander, fennel, anise, sinamoni, fennel, St. wort). Asi usangotenga doro. Inotengeswa chete muzvitoro zvine hunyanzvi «Vinmonopolet». Iyi network alkomarketov ndeye nyika uye inoshanda chete pamazuva evhiki.
Norway pamepu yeEurope
0.1 Pamberi Yokubhejera muNorway
0.2 Rwendo rweHotel 10 yeNorwegian Online Casino Sites
2.1 Sites online casinos anobvuma vatambi vanobva kuNorway
3 Kubhejera muNorway
3.0.1 Nhoroondo pfupi yeNorway
3.1 Kubhejera muNorway
3.1.1 Oslo kukokwe
3.1.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peNorway neNorway
3.1.3 Norway pamepu yeEurope